संसदीय दलमा ओलीको दाबी ः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसैको ल्याकत छैन | Ekhabar Nepal
राजनीति चैत्र ७ 2077 ekhabarnepal
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना नै नरहेको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ल्याकत नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छैन, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्ने ल्याकत देखिएको पनि छैन । ल्याउने भए पुनःस्थापना भएसँगै ल्याउँथ्यो, अब त्यो सम्भावना छैन,’ ओलीले भन्नुभयो ।
वामदेव गौतम समेत उपस्थित रहेको संसदीय दलको बैठकमा ओलीले माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह एमाले विभाजनमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यकर्ता भेलाको नाममा पार्टीहित विपरीत काम गर्नेहरूले माफी माग्नुपर्ने अडान ओलीको छ ।
उहाँले पार्टीभित्र गुटगत काम गर्नेलाई कारवाही हुने बताउनु भएको छ । छुट्टै भेला गरिरहेका अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेर जानुको विकल्प नरहेको ओलीले बताउनुभयो । त्यसका लागि विधि र पद्धति बनाउने आधार तयार गर्दैछौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि विधि पुगेन भनेर विरोध नहोस् भनेर हामी सचेत छौं । पार्टीभित्र गुटगत काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । उहाँहरूका गतिविधि कारबाहीका भागिदार हुनुहुन्छ ।’
बैठकमा प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमलाई एकताको कुरा छाड्न ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ । ओलीले गौतमलाई लक्षित गर्दै एकता–एकता भनेर पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘नेकपादेखि एमालेसम्म तपाईं एकता–एकता भन्दै हिँड्नुभएको छ । एकता कसले नचाहेको छ ? बुझ्नुभयो होला नि ’ अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भन्नुभयो, ‘अब पनि यसै भन्नुहुन्छ कि छाड्नुहुन्छ ? एकता–एकता भनेर पछि नलाग्नुस् । उहाँहरू एमालेमा बस्न चाहनु नै भएको छैन । पार्टी कसरी एक बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ लागौं ।’
गुटको प्रस्ताव स्वीकारिँदैन ः व्यक्तिगत रुपमा आउनुहोस्
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गुटगत प्रस्तावलाई नस्वीकार्ने बताउनु भएको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षबाट पत्र लिएर पुगेका तीन सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत गुनासोमात्रै आफूले सुन्ने बताउनु भयो ।
नेपाल समूहका ३८ सांसदको हस्ताक्षर रहेको पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा वताउनु भएको हो।
‘गुटगत प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन, केही गुनासाहरु छन् भने व्यक्तिगत रुपमा आउनुहोस्’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद पदम गिरीले भन्नुभयो, ‘गुटगत मानसिकता कुनै पनि हालतमा स्वीकारिँदैन।’